युद्धकालमा गाउँमा भेटेको भए खड्ग ओलीलाई भाटा हान्थ्यौं | नेपाल आज
युद्धकालमा गाउँमा भेटेको भए खड्ग ओलीलाई भाटा हान्थ्यौं
सोमबार, २३ असोज २०७४ गते प्रकाशित
–गोपाल किराँती, नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेमा विलय गराउने जुन निर्णय गर्नु भएको छ यो आपत्तिजनक छ । नेकपा एमाले भनेको कम्युनिष्ट पार्टी नै होइन । यो पार्टीले कम्युनिष्ट विचार र आदर्शलाई स्वीकार पनि गर्दैन । यो पार्टीले मूलत माओवाद र पहिचानको मुद्धालाई स्वीकार गरेको छैन । एमाले भनेको पहिचानविरोधी पार्टी हो । संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएर एमालेले आफू पहिचान विरोधी भएको स्पष्ट गरिसकेको छ ।
माओवाद र पहिचानको मुद्धालाई धरापमा पारेर विलय स्वीकार गर्न सकिँदैन । अवस्था यसै गरी अगाडि बढ्यो भने मैले पार्टी छाड्नु पर्छ र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गर्नु पर्ने अवस्था देख्दैछु ।
मेरो यस विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी पनि भइरहेको छ । उहाँलाई मैले मेरा यी दुई विषय पूरा हुन्छन् भन्ने प्रत्याभूति दिनुस भनेको छु । उहाँले पार्टी भित्रको आन्तरिक दुई लाइन संघर्ष गर्नुस पार्टी छाडेर जाने कुरा नगर्नुस भन्नु भएको छ । मैले माओवादको आन्दोलनमा दुई लाइन संघर्ष गर्न सकिन्छ तर पहिचना र माओवादको सत्रु नेकपा एमालेसँग विलय भएर कसरी संघर्ष गर्न सकिन्छ ? भन्ने मेरो तर्क हो ।
पहिचानको विषय भनेको आन्तरिक राष्ट्रियता व्यवस्थापनको कुरा हो । किराँत राज्य प्राप्तिका लागि सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको बेला हामी जनयुद्धमा समाहित भएका थियौं । तर अहिले एमालेसँग विलय हुने कुरा आएको छ । सबैलाई थाहा छ त, एमाले भनेको हरिया घाँसमा नदेखिने गरी लुकेर बसेको हरियो सर्प हो । यस्तोसँग मितेरी लगाउन मिल्छ ?
जसले माओवाद मान्दैन त्यो कम्युनिष्ट हुन सक्दैन । मान्यताअनुसार हिन्दूभएपछि वेद मान्नु पर्छ, मुसलमानले कुरान मान्छ, बौद्धमार्गीले धम्मपथ मान्छन्, कम्युनिष्टले पनि माओवाद मान्छन् । एमाले त त्यो सब मान्दैन ।
प्रचण्डले के सोचेर यसो गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । असल सोचेको भए पनि हामी भौतिकवादीहरु मनमा असल होला भनेर पत्याउँदैनौं । असोज १६ र १७ गतेको बैठकमा जे उहाँले भन्नु भयो त्यही हो हामीले पत्याउने । अब अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रचण्ड मेरो नेता हो । भगवान होइन । गल्ति जोबाट पनि हुन्छ । हुनु अनौठो पनि भएन । नेतृत्वको आलोचना र विरोध हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा मैले प्रचण्डलाई अध्यक्ष अस्वीकार गरेको छैन । गर्न पनि सक्छु ।
अब ओलीको कुरा गर्दा उनी त फटाहा हुन् । वर्षौंसम्म विदेशीको दलाली गरे । मर्ने बेलामा केही राम्रो गरौं भन्ने लागेर हुन सक्छ उनले अहिले राष्ट्रवादको राग अलापेको । वनको राजा कुसुन्डालाई हजुर भन्नु परो भने जस्तो भयो पार्टी लगेर एमालेमा मिसाउँदा ।
माओवादी र एमालेले छ बुँदे सहमति गर्दा एकले अर्काको आलोचना नगर्ने भन्ने सहमति पनि छ । तर मैले त छ बुँदे मानेकै छैन । यसकारण म बोलिरहेको छु । खड्ग ओली फटाहा नै हो । जनयुद्धकालमा गाउँतिर भेटेको भए ओलीलाई भाटा हानिन्थ्यो । सहर बसेका कारण छुटे । जनयुद्धले गाउँ जित्यो, सहर जित्न नसक्दा खड्ग ओली जस्ता फटाहा बचे ।
यति हुँदा हुँदै पनि मानिस परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने विज्ञानको नियम छ । रत्नाकर डाकु वाल्मिकी भए । तर म खड्ग ओलीमा सुध्रिने संकेत भने देख्दिनँ । जाली नै छन् । यस्तै रहिरहन्छन् ।
वाम एकताको कसले गरायो, कसरी भयो, भारतले हो कि चीनले हो भनेर मानिसहरु लख काटिरहेका छन् । म त्यस्ता मान्छेलाई भन्न चाहन्छु कि यस्तो पराधीन मानसिकता त्याग्नुस । नेपालीहरु आफैले पनि यस्ता निर्णय आफै लिन सक्छन् । हामी आफैले आफ्नो काम गर्न सक्छौ । खड्ग ओली र प्रचण्डकै निर्णयमा यसो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
यसमा माओवादीहरुले भुल्न नहुने कुरा के छ भने एमालेले प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउँछ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । एमाले जस्तो छट्टु पार्टीले प्रचण्डलाई कार्यकारी दिँदैन । यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । अब सहमति नै ६० र ४० को छ । पार्टीमा ५१ प्रतिशत हुँदा त बहुमत पुग्छ । जसो गरे पनि हुन्छ । ६० प्रतिशतले त पेलिहाल्छ नी ।
यो धु्रवीकरणमा खतरा को बाट होला भन्ने सबैलाई लागेको छ । मेरो बिचारमा पहिलो खतरा त एमालेबाटै छ । त्यसपछि बाबुरामबाट छ । बाबुरामले दुई वर्षसम्म कम्युनिष्टको विरोध गर्नुभयो । अब अहिले फेरि आउनु भएको छ । यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन र बन्न आउनु भएको होइन । कम्युनिष्ट नबनाउन चाहिँ आउनु भएको हो । चार जना बुढाबुढीले धानेको पार्टी थियो । ठूलो ठाउँ पाउनु भयो आउनु भयो ।
मैले माओवादी पुनर्गठन गर्नु पर्यो भने मेरो पार्टीमा धेरै अटाउँदैनन् । जस्तो कि मोहन बैद्य हाम्रो दाजु हुनुहुहुन्छ । तर राजनीतिमा पारा ल्याउनु हुन्न । विप्लव पहिचान विरोधी हुन् । उपेन्द्र यादव माओवादी विरोधी हो । यस्तासँग सहकार्य सम्भव छैन ।
म यसपटक चुनाव पनि लड्दीन । प्रचण्डले मनस्थिति बिगारिदिएका छन् । मनस्थिति बिग्रेको बेला चुनावमा जानु हुँदैन । मैले भनिसकेको छु, समानुपातिकमा पनि नाम नराख्नू भनेर । मैले भनेको नमानी नाम राखिदिए भने निर्वाचन कार्यालय गएर फिर्ता लिइदिन्छु ।
म त अब बैचारिक काम गर्ने हो । ३० हजार त किताब पढिसकेको छु । अब ३० हजार पढ्छु । अब वैज्ञानिक भएर काम गर्छु । मलाई सांसद मन्त्री हुने कुनै शौख छैन । दुई पटक चुनाव लडे । एक पटक जित एक हार भयो । त्यो बेला पनि बाध्यताले लडेको थिएँ ।
(नेता किराँतीसँग भएको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाण्डलाई फेरि सर्वोच्चमा उपस्थित गराइने
माथिल्लो अरुण ‘कम्पनी मोडल’मा बन्ने भयाे, सर्वसाधारणले पनि सेयर पाउने
लाखौं रुपैयाँसहित १२ जुवाडे पक्राउ
लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगको तयारी तीव्र, पुरस्कार राशी दोब्बरले वृद्धि
भारतको ‘अहङ्कारी’ अभिव्यक्तिबाट दुःखी : इमरान खान
नेपालका को प्रधानमन्त्री कस्ता ? (भिडियाेसहित)